तिहारको मुखैमा भाइमसलाको भाउ ह्वात्तै बढ्यो, के को कति छ त मुल्य ? – List Khabar
Home / समाचार / तिहारको मुखैमा भाइमसलाको भाउ ह्वात्तै बढ्यो, के को कति छ त मुल्य ?
तिहारको मुखैमा भाइमसलाको भाउ ह्वात्तै बढ्यो, के को कति छ त मुल्य ?
admin November 1, 2021 समाचार Leaveacomment 142 Views
तिहारको मुखैमा भाइमसलाको भाउ ह्वात्तै बढ्यो, के को कति छ त मुल्य ? तिहारको मुखैमा भाइमसलाको भाउ बढेको छ । तिहारमा बढी खपत हुने चिनी, खाने तेल, मैदाको पिठो, नरिवल, छोकडा, काजु–किसमिस लगायतका बस्तुको भाउ अहिले अत्याधिक बढेको छ ।
काजु, किसमिस, बदाम, ओखरमा धेरै मूल्य वृद्धि भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्षसमेत रहेका काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य संघका वाणिज्य तथा आपूर्ति समिति सभापति दुर्गाराज श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार बजारमा छोकडाको अभाव छ । काजुको मूल्य होलसेलमै एक किलोको १५ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।
होलसेलमै किसमिस प्रतिकिलो ४२५ रुपैयाँ, सुकमेल प्रतिकिलो २९ सय रुपैयाँ, ल्वाङ प्रतिकिलो १२ सय ८० रुपैयाँ, पेस्ता प्रतिकिलो १६ सय ६० रुपैयाँ, बदाम प्रतिकिलो १ हजार ७५ रुपैयाँ र ओखर प्रतिकिलो ५२५ रुपैयाँ र छोकडा १७५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
खुद्रा व्यापारीले यो मूल्यमा १० प्रतिशत जोडेर बेच्ने भएकाले उपभोक्ता महँगीको मारमा पर्ने भएका हुन् । भारतबाट आउने नरिवल, पाकिस्तानबाट आउने छोकडा र चीनबाट आउने ओखर आउन नसकेका कारण मूल्य बढेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
चिनी, आँटा र तेलको मूल्यमा पनि भारी वृद्धि:- चिनीको भाउ किलोमै १ सय रुपैयाँ पुगेको छ । होलसेलमै ९३ रुपैयाँसम्म पुगेका कारण उपभोक्ताले एक किलो चिनीको सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता आईपरेको हो । आँटा–मैदाको मूल्य बोरा (५० किलो) मा २ सय रुपैयाँ बढेको छ  ।
बढी खपत हुने समयमा एकाएक मूल्य बढेपछि खुद्रा व्यापारीहरु नै चिन्तामा छन् । उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले मूल्य बढेकोमा गाली आफूहरुले खानु परेको खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमूलकाजी तुलाधरको गुनासो छ ।
‘मूल्य बढ्नुमा आयातकर्ता र उत्पादक दोषी हुन्’ उनले भने, ‘हामीले यस विषयमा वाणिज्य सचिवलाई पनि जानकारी गराएका छौँ ।’ चिनीको भाउ एक महिनामै होलसेलमै ५ रुपैयाँसम्म बढेको छ । साल्ट ट्रेडिङले प्रतिकिलो ७९ रुपैयाँमै चिनि बिक्रि गरिरहेको भएपनि पर्याप्त नहुँदा उपभोक्ता मारमा छन् ।
साल्टसँग करिब २ सय टन मात्रै मौज्दात छ । उसले पनि आउने ग्राहकलाई पर्याप्त नदिई प्रतिग्राहक २ किलोका दर दिने गर्छ ।यद्यपी, २ किलोका दरले दिँदा तिहार भरीका लागि २ सय टनले धान्ने आँकलन गरिएको छ ।
तिहारमा अत्याधिक खपत हुने मध्येको एक खाने तेलको भाउ पनि चुलिएको छ । लिटरको २६८ रुपैयाँमा पाउँदै आईएको खाने तेलको मूल्य अहिले २९५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
Previous विश्वमा आज घटेका यी चर्चित ५ घटना, जस्लाई इतिहाँसले कहिल्यै भुल्दैन
Next शरीरमा देखिएका यस्ता गम्भीर समस्याको जरा देखी उपचार गर्छ भुटेको लसुनले ! ग्यास्ट्रिकको समस्या छ भने नछुटाई पढ्नुहोला